Alshabaab oo fagaare ku Toogatay Sixiroole iyo Askari ka tirsanaa Maamulka Jubbaland - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Alshabaab ayaa xukun Dil ah ku fulisay nin lagu soo eedeeyay inuu ahaa Sixiroole iyo askari ka tirsanaa maamulka Jubbaland.
Maxkamadda Alshabaab ee Jubbooyinka ayaa xukun dil toogasho ah ah ku riday labadan nin oo lagu fuliyey Fagaare ku yaalla degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoo ay ka qeyb galeen dadweyne fara badan.
Ragga toogashada lagu fuliyay ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdullahi Xasan Cumar oo 59 sano jir ah oo la sheegay in lagu helay inuu ahaa nin Sixirka ku shaqeysan jiray muddo dheer, kuna dhibaateeyay dadka.
Waxa kaloo togashada lagu fuliyey Maxamed Mowliid Aadan oo 48 sano jir ah, kaasoo la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada Booliska Jubbaland oo Alshabaab ku qabteen degaanka Janaay Cabdalle ee duleedka Kismaayo.
Previous articleJOWHAR: Magacyada laba xildhibaan oo ku dhaawacmay Qarax loo dhigay Jid ay marayeen
Next articleFahfaahin: Dad isugu jira Askar iyo shacab oo lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho